Houselọ ekpere nke United - WRSP
Ụlọ Ụlọ Ekpere United
UNITED UNLỌ EKPERE BANYERE MMAD ALL NIILE
UNITED OFLỌ EKPERE N’ FORLỌ ỌH ALLR ALL
1904 Marcelino Manuel da Graca si na Brava, Cape Verde Islands kwaga United States. ọ mechara kpọzie aha ya bụ Charles M. Grace.
1919 Grace hiwere otu ụka na West Wareham, Massachusetts.
1921 Grace mepere ụka nke abụọ ya na New Bedford, Massachusetts, wee kpọọ onwe ya bishọp ya.
1926 United House of Prayer maka mmadụ niile na-ewere aha ya na Charlotte, North Carolina.
1925-1935 Chọọchị gbasaa ngwa ngwa ma gbadaa n'akụkụ ọdịda anyanwụ; a n'ime akwụkwọ a na-akpọ Grace Magazine e guzobere; baptizim ọkụ sooks malitere; Bishop Grace ghọrọ onye amaara mba niile.
1938 Grace malitere usoro itinye ego ya na nnukwu ụlọ ala.
1939-1940 Grace kpọrọ oku maka ndị ozi ọhụụ, ọtụtụ ụmụ okorobịa nọ na ụka zaghachikwara ohere ndu.
1944 Edere edemede dị oke mkpa banyere oflọ Ekpere nke metụtara echiche ọha mmadụ banyere ụka maka ogologo oge.
1940s-1950s structurelọ nke Ekpere guzosiri ike, Grace wee belata ọrụ ya na arụmọrụ ụka kwa ụbọchị.
1960 Walter McCollough ka a hoputara bishọp mgbe Grace nwụsịrị.
1962 Otu na-enwe nkụda mmụọ kewapụrụ ma hibe Gracelọ Ncheta nke Ezi Grace.
1970s-1980s Site na mmemme ohuru, McCollough kwusiri ike banyere ebumnuche nke ọha mmadụ na afọ ojuju maka ndị otu ụka.
1991 Samuel C. Madison hoputara bishọp mgbe McCollough nwụsịrị.
2008 CM Bailey hoputara bishọp mgbe ọnwụ Madison nwụsịrị.
Ulo ekpere nke ndi mmadu nile, nke weputara aha ya site na Isaiah 56, bu ulo uka nke okpukpe di n’ime Omenala-nmekorita nke ndi Pentikost nke gosiputara nnwere onwe nke okpukperechi ya ma buru ndi ihere dika “ndi okpukpe”. Onye guzobere ya, Charles M. “Daddy” Grace (1881-1960), si Cape Verde kwaga United States, agwaetiti Afro-Lusophone, ebe a zụlitere ya na Chọọchị Katọlik. Grace malitere ụka mbụ ya na Massachusetts na 1919; afọ abụọ ka nke ahụ gasịrị, ọ mepere ụka nke abụọ wee malite ịkọwa onwe ya dịka bishọp. N’etiti afọ ndị 1920s Grace bidoro okirikiri ngagharị nke ikwusa ozi ọma na ndịda ọwụwa anyanwụ United States, na-enwe nzukọ ụlọikwuu jupụtara na egwu dị egwu, ịgba akaebe, nkwusa, na ọgwụgwọ okwukwe. Ọ kpọtara ndị na-enyere ya aka site n’obodo ruo n’obodo iji kpọsaa, kpọọ egwu, jupụta oche, ma ọ bụghịkwa kwado ọrụ ahụ. Grace choro ka ndi mmadu gbakota onu site na ntinye uche nye Chineke na ntinye aka na nnwekorita karia n'ihi amara nke onye ndu, ya mere o hapuru ya ndi nwere mmasi ichota ihe mgbe nzuko uloikwuu ahu kwusi, ya na ndi na enyere ya aka hapu obodo . N'okpuru ozi ọhụụ nke Grace họpụtara, ndị otu ọhụụ nwere ọrụ maka ịmepụta na ịnọgide na-enwe ebe ofufe na obodo ime mmụọ, nke a nyekwara ha ike, ogo nke nnwere onwe, na itinye ego miri emi n'ụlọ obibi okpukpe ọhụrụ ha. Nke a bụ ụkpụrụ ụlọ nke Ekpere nke mbido ka ọ na-eto site na 1920s na 1930s: Grace ka bụ onye nkwusa na-ejegharị onwe ya, na newlọ Ekpere ọhụrụ na-ebili ma na-agbada n'akụkụ ọdịda anyanwụ ka ndị mmadụ na-anabata ozi okpukpe ya. A kwanyeere ya ugwu dịka onye isi ụka nke ụka wee jiri ịhụnanya kpọọ "Papa".
Ka ọ na-erule oge ọnwụ Grace na 1960, e nwere ọtụtụ narị oflọ Ekpere gafee United States, ọtụtụ n'ime ha dị na East East. Chọọchị ahụ nwere ihe onwunwe na ọtụtụ nde dollar, mana enweghị ndekọ na-ekwekọghị ekwekọ nke Grace mere iwu ọgbaghara maka ndị e boro ebubo ịhụ chọọchị site na mgbanwe gaa n'ọchịchị ọhụrụ. Edere ọtụtụ ikpe gbasara akụ, ụtụ isi, ihe onwunwe, na ikike nketa, ma ndị a were ọtụtụ afọ iji kpebie na usoro ụlọ ikpe. Ka o sina dị, n'okpuru bishọp ọhụrụ Walter "Daddy" McCollough, oflọ Ekpere nọgidere na-elekwasị anya. Ntuziaka ohuru McCollough weghaara na ndi ndu ya, karia banyere oru ndi mmadu, mere ka ndi nzuko kwenye karie ndi mmadu. Ọ bụ ezie na ọ bụ nzukọ pere mpe taa, nke nwere ihe karịrị otu narị ụka na mba niile, United House of ekpere ka bụ nzukọ okpukpe kwụụrụ onwe ya nwere njirimara doro anya na ọtụtụ ọgbọ nke ndị otu.
Oflọ Ekpere ahụ biliri n’oge mgbe ọdịiche dị n’etiti ịdị nsọ, Pentikọstal, na nkà mmụta okpukpe Nazaret malitere ịjụ oyi, inyocha n’ụzọ zuru ezu banyere nkà mmụta okpukpe ga-egosi na nkwenkwe na omume ya nwere, ka oge na-aga, nwere akara nke ọ bụla n’ime ha. Taa, oflọ Ekpere dị nnọọ na nkà mmụta okpukpe na okwukwe Pentikọstal, dị ka ụdị Atọ n'Ime Otu nke Iso Christianityzọ Kraịst nke e ji mara ụdị ofufe nke ofufe, gbanyere mkpọrọgwụ na mmụọ nsọ, ma nwee njikọ chiri anya na mkpa nke onyinye ime mmụọ. Memberslọ ndị na-ekpe ekpere na-ekwere na Chineke nwere ike inye onyinye dị iche iche nke mmụọ ma a na-ewere glossolalia, ma ọ bụ ịsụ asụsụ dị iche iche dị oke mkpa n'etiti ha. Kpụrụ okwukwe ahụ na-akọwapụta na mmadụ “ga-amụ ọzọ site na Mmụọ Nsọ,” na ịsụ asụsụ dị iche iche bụ ihe akaebe nke ezi nzọpụta mmadụ; ọ bụ na baptism nke Mọ Nsọ. A na-ahụta usoro nke nzọpụta dị ka ndị na-esochi, yabụ sọọsọ ndị edoro nsọ nwere ike ịnata Mmụọ Nsọ.
Bishop Grace buru ụzọ mee aha ya site na ịgwọ ọrịa, nkwenye na ọgwụgwọ Chineke ka dịkwa na ụka. Houselọ Ekpere nke izizi, ọkachasị, pụrụ iche n’otú o si jiri ngwa nnọchi anya maka iji okwukwe agwọ ọrịa. Ndị otu nwere ike ịhọrọ site n'ọtụtụ ngwaahịa na-ebu aha Grace, dị ka Grace Toothpaste na Akwụkwọ Ederede Ederede, ụfọdụ n'ime ha kwuru na ha nwere ikike igbochi na ọgwụgwọ. Iji ma-atụ, ndị otu nwere ike ịzụta akwa ọgwụgwọ, otu obere akụkụ nke bishọp gọziri. Ihe nnọchianya proxy kachasị dị mkpa bụ Grace Magazine, akwụkwọ bụ isi nke chọọchị, nke nwere ike eyi ma ọ bụ buru ya n'ahụ iji kwalite ọgwụgwọ anụ ahụ ma nwee ike ịgụ ma mụọ maka amamihe banyere ọgwụgwọ. Fọdụ ndị na-eme ihe dị egwu na magazin ahụ, na-etinye ya na mmiri ma na-a itụ ya iji gwọọ ọrịa ha. N'akụkụ a, a ga-agụrịrị Houselọ Ekpere nke izizi n'etiti ndị otu okpukperechi ole na ole ahọpụtara bụ ndị ụzọ dị iche iche dị iche iche iji gwọọ adịghị agakọ ọnụ. Agbanyeghị, n'ime iri afọ gara aga Bishop Grace jiri nwayọ kwusie ike n'ịgwọ okwukwe, dị ka ndị bishọp nọchiri ya, dị ka n'oge ugbu a ọ na-anọchite naanị obere akụkụ nke nkà mmụta okpukpe nke oflọ Ekpere. Tụkwasị obi na nkà mmụta ọgwụ nke Ebe Ọdịda Anyanwụ ajụbeghị.
Nkwenkwe Houselọ Ekpere a na-ekwukarị nke kpatara ọtụtụ esemokwu bụ echiche bụ na bishọp ahụ bụ Chineke. Ọha gbadoro anya na nkwenkwe a nwere ike ịdabere na nyocha izizi nke ụka nke Arthur Huff Fauset (1944) dere. Na nkwuputa sitere n'aka onye otu a na-amataghi aha ya achọtara n'edemede ya, bishọp e buliri ogo nke Chukwu. Kaosinadị, ejiri nkwupụta ahụ mee ihe n'ụzọ bara uru: Fauset gbanwere ya, dezie ya, ma debe ya n'ụzọ na-ezighi ezi dịka ụdị nkwupụta okwukwe gọọmentị n'akụkụ ụlọ ọrụ ụka. E degharịrị ya ọtụtụ oge na ebe ọzọ, na-ahapụ ndị na-agụ akwụkwọ na-eche na ndị otu ụlọ ekpere niile kwenyere na bishọp ha bụ mmụọ nke Chineke n'ụwa, n'agbanyeghị nkwupụta doro anya na papa Grace Grace n'onwe ya. Ezigbo azịza nye ajụjụ a dị mgbagwoju anya karị, ọ ga-enwerịrị ọtụtụ ndị otu kwenyere na ihe dị iche iche gbasara ụdị bishọp ogologo oge. O yikarịrị ka sitere na mgbọrọgwụ Katọlik nke onye guzobere ya, thelọ Ekpere na-ekwere na nnọchi nke Apostolic; na nkwenye, nkwenkwe ahụ na-ekwu na ha kwenyere na "otu onye isi dị ka onye na-achị alaeze Chineke," nke na-egosi na bishọp bụ onye ndu mmadụ nke Chineke nyere nkwado nke ụka Chineke dị n'ụwa. Fọdụ ndị otu, ma nke gara aga ma ndị nke ugbua, gara n’ihu ịkọwapụta bishọp dịka amụma dị; dị ka otu onye otu kọwara, aha “Papa” pụtara na “Jizọs nọ na bishọp ahụ.” Ọ bụghị ihe ọhụrụ ịnụ ekpere ndị a na-ekpegara bishọp nakwa site na bishọp, nke a na-aga n'ihu na-agbachi azịza nke ihe ndị otu kwenyere gbasara ọdịdị nke nwoke ahụ na-eje ozi dịka onye ndu ha.
Ọrụ ofufe na ihe omume pụrụ iche na oflọ Ekpere gụnyere oghere maka ngosipụta nke onyinye ime mmụọ, ma enwekwara mesiri ike na egwu. Formdị bụ isi nke egwu na oflọ Ekpere, nke a kpọrọ "Tie mkpu," nwere ike n'eziokwu bụrụ onyinye ọdịnala ya kachasị iche. Mkpu bu udi nke okpukperechi di egwu nke eji egwu egwu mee nke bu ihe omuma. A na-achọta usoro mmụta okpukpe ya n'Abụ Ọma nke 150, nke na-akpọ ndị mmadụ ka ha jiri abụ na-eto Chineke too ya, ebe aha ya sitere na nrụtụ aka n'akwụkwọ nke isii nke Joshua. N'ịkọwa amaokwu Akwụkwọ Nsọ abụọ a, Tie mkpu egwu na-egosipụta mmeri nke Chineke na nke ndị Chineke, ma mgbe opi na-akpọ ọgbakọ ume ka ha zaghachi site n'ito Chineke. Egwu a bu egwu Chukwu, nke e zubere abughi nani ka a nu ma kporie onu ya ma kpalite mmuta ime mmuo: ijidesi ndi mmuo nso. Mkpu dị mkpa, na mgbe ụfọdụ dị mkpa, karịa ozi ọ bụla okenye nwere ike ikwusa, yabụ mkpu agha bụ akụkụ dị mkpa ma dị mkpa nke ndụ emume nke ụka.
Mgbakọ, nke na - egosi njedebe na mbido nke ụka ọ bụla, nwere ike bụrụ isi ihe dị na kalenda nke ụka. A na-achọta ntọala ya na akwụkwọ Ọpụpụ na Levitikọs. Mgbakọ abụghị otu ihe omume, ọ bụghịkwa naanị n'otu ebe; kama, obu usoro nke n'eme otutu mpaghara ebe ulo ekpere di. Ya mere, oge mgbakọ a na-ewe ihe dịka ọnwa atọ ma chọọ njem dị ukwuu site n’aka ndị isi minista, bishọp, na ndị ọzọ dị mkpa. Otu izu ụka a na-ahụkarị na mpaghara enyere ga-agụnye ịme egwu, ndị na-ekwu okwu ọbịa, baptizim a na-eme, nleta sitere na bishọp, na ohere maka ndị enyemaka ụka (klọb) iji gosipụta onwe ha n'ihu ọha na mmemme na / ma ọ bụ usoro.
Baptizim na-abụkarị akụkụ dị mkpa nke mgbakọ, ọ na-eme otu ugboro n'afọ na mpaghara ọ bụla na njedebe nke mgbakọ ahụ
izu. Ndi otu n’ile anya ya dika ohere ka agbaghara ha ndahie ha mehiere n’afọ gara aga ma bia soro Chineke bia. Dika nkwuputa ulo nke Ekpere si di, baptism nke mmiri bu emume nke nhichapu na nmehie, karia ememe nke oge nke na eme ka mmadu puta dika onye otu uka Kraist. Kemgbe afọ 1930, amatala Houselọ Ekpere maka emume a na-eme mgbe ụfọdụ n'ọkụ mmiri ọkụ, nke bishọp ga-eme ndị bịara baptizim n'otu mmiri n'okpuru iyi ọkụ ọkụ, karịa n'otu n'otu n'ime ọdọ mmiri. A na-agbanye ihe ịgba ọkụ, nke gbanwere ka ọ bụrụ obere ọkụ, na-aga elu n'ime ikuku, yabụ baptism mere ka mmiri ahụ si na mbara igwe gbadata ndị kwesịrị ntụkwasị obi. N'ihi na ndị a mere n'okporo ámá obodo, baptizim nkepe nke ọkụ bụ ihe omume ọha nke ndị nkiri na-agakarị. Ndị na-anọghị na mba ọzọ hụrụ ya dị ka ihe arụ ma n'ọtụtụ oge ndị ozi sitere n'okwukwe ndị ọzọ lere ya anya dị ka ihe jọgburu onwe ya nke na ha gbalịrị ịkwụsị ihe omume ahụ. Ihe ngosi nke oku nke oku mere ka ha buru uzo nke mgbasa ozi nke ulo uka na papa nna Grace, ma n'okpuru bishọp nke abuo ha napuru ha ma taata na adighi nma.
Site na nwata, Grace kpachara anya imepụta ihe owuwu iji jikọta ụka ya niile. Aha ụlọ United House for Prayer for All People guzobere na Charlotte, North Carolina na 1926, Grace wee hiwe nzukọ ahụ na Washington, DC n'afọ na-esote. Otu usoro iwu gosipụtara ike na usoro iwu akọwapụtara, ma na-enyocha ma na-edegharị ndị a oge ụfọdụ na nnọkọ nke ndị isi ala. N'okpuru nduzi nke Grace, atụmanya omume maka ndị otu siri ike ma e jiri ya tụnyere ọdịnala America na nnukwu, ọ bụ ezie na ha adịghị ka ndị ọzọ dị iche iche na ọdịnala ịdị nsọ-nke Pentikọstal, nke a anọgidewokwa bụrụ eziokwu zuru oke ọbụlagodi ụka malitere kemgbe ọtụtụ iri afọ. Akwụkwọ dị iche iche nke ụka mba dị iche iche gbakwunyere echiche dị mkpa ma nye ụzọ maka ndị otu ka ha na obodo ụka sara mbara. Ihe owuwu ndị a niile dị n'ime afọ iri mbụ nke ụka ahụ, ha nyekwara aka weta ndị òtù ọhụrụ n'ime ogige ahụ n'otu ụzọ.
Bishọp Grace kpọrọ oku na afọ ụka 1939-1940 maka ndị ozi ọhụụ, ọtụtụ ụmụ okorobịa nọ na chọọchị gbagokwara; womenmụ nwanyị, dị ka nkọwa Akwụkwọ Nsọ si dị, erughị eru maka ọkwá ọchịchị nke ọgbakọ. Nlekọta onwe onye nke Grace nke ọzụzụ ndị ozi na iri afọ ndị a gara aga nyeere aka mee ka ụka dịrị n'otu na-elekwasị anya na omume, n'agbanyeghị ọrụ ndị ahụ dị na mgbago mgbago ọwụwa anyanwụ na ebe ndị dị anya dị ka Detroit na Los Angeles. A na-akpọkarị ndị ụkọchukwu dị ka ndị okenye, a na-akpọkwa ndị kachasị nwee ibu ọrụ Ndịozi. Ka ndị ozi ọhụrụ a toro na ọrụ ha na 1940s na 1950s, Grace na-enyefe njikwa nke ihe ndị dị kwa ụbọchị n'ọkwa ọhụrụ nke onye ndu a.
Dị ka onye ndú okpukpe, a maara Grace dị ka “Papa” nke ndị ahụ. Ọ bụ nna-nwe, na utu aha ahụ bụ “Daddytọ Nna” bụ ihe nnọchianya nke nsọpụrụ na nsọpụrụ. Houselọ Ekpere nke United dị ka ụlọ ọrụ anọwo ma dịrị, n'ọtụtụ ụzọ, ngosipụta nke echiche na ọdịbendị nke onye guzobere, site na ụdị ejiji mara mma nke ndị bishọp na-esote, na usoro nke ụka kwa afọ nke na-eme ememe Cape Verdean. , na usoro ego nke Grace kwadoro. N'ụzọ dị oke mkpa, Grace rụkwara usoro nke bishọp ụka nwere ikike zuru oke na njigide mkpebi niile metụtara ego, ọrụ ije ozi, na usoro ụka. Ike a bishop na-enweghị njedebe bụ ihe ọzọ mere ụfọdụ ga-eji were thelọ Ekpere dina n'okpukpe ndị ọzọ.
Walter McCollough nọchiri Daddy Grace dị ka bishọp mgbe Grace nwụrụ na 1960. McCollough, onye sonyeere dị ka onye na-eto eto na
South Carolina, na-eje ozi dị ka onye pastọ nke isi ụlọ ụka dị na Washington, DC. McCollough ghọrọ ọnụnọ dị egwu n'ime ụka ahụ, na-ejigide usoro njem njem bishọp ma gbanwee ụdị nke ya iji dabaa ụkpụrụ ahụ siri ike. Ka ọ na-etolite ọrụ nke “Daddytọ Nna” ma bụrụ ndị ndị otu na-anabata ya, ụfọdụ ngwaahịa na ndị enyemaka ụka chere na ọ bụ moniker, Magazin McCollough na McCollough State Band. Ka ọ dị ugbu a, ọ kpọpụrụ chọọchị ahụ pụọ na ụfọdụ ọrụ ngosi ya dị oke egwu dị ka parades na baptism hose baptism, ọ kwụsịkwara ụfọdụ n'ime iwu ndị otu siri ike. Ọ rụrụ ọrụ iji meziwanye akụrụngwa ụka, ma kpachara anya banyere ihe gbasara ego, ihe onwunwe, na ụtụ isi, na-ahụ na ihe omume azụmahịa nke ụka na-arụ ọrụ nke ọma. Na 1970s na 1980s, o nyere aka rụọ ọtụtụ ogige ndị nwere obere ego, o mekwara onwe ya ihe enyemaka nye ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na District nke Columbia nke mere na o mepụtara olu maka onwe ya n'okwu mpaghara. N'okpuru nduzi ya, oflọ Ekpere mepere ebe nlekọta ụbọchị, ụlọ oriri na ọ cafụ ,ụ, na ụlọ ndị agadi, ọ gbakwara mmemme mmemme mmekọrịta ọha na eze dịka mmemme mmemme, ụlọ akụ nri, mmemme ọrụ ndị ntorobịa, akwụkwọ ndebanye aha ndị ịtụ vootu, na ndị na-ekwu ihe ọmụma. Mgbanwe nke McCollough na House of Prayer na nkwupụta okwu ya mere ka o kwekọọ na ebumnuche nke ụka ndị isi ala America, si otú a na-enyere ya aka ịhapụ mpaghara mmekọrịta.
Samuel C. Madison ghọrọ bishọp nke atọ nke Houselọ Ekpere nke United mgbe Walter McCollough nwụsịrị na 1991. Na mbụ
site na Greenville, South Carolina, Madison sonyeere ụka ahụ dịka nwatakịrị ma bụrụ onye ụkọchukwu na ihe dịka 1940. N'ime ọtụtụ afọ o jere ozi na chọọchị dị na Carolinas, Virginia, na Philadelphia, emechara họpụta ya na M Street Church dị na Washington, DC na 1969 na ibia uka Senior Minister na 1986. O gbara iri isii na iteghete mgbe emere ya bishop na May, 69.
N'ịwere aha "Nna Dị Oké Ọnụ Ahịa," Madison soro usoro nhazi nke McCollough hapụrụ. Ọ gara n'ihu na atụmatụ ụlọ nke mba, gụnyere nnukwu ndozi nke oghere ochie na iwu ụlọ obibi ọhụụ na ụlọ ọrụ azụmaahịa. Bishop Madison kwalitere agụmakwụkwọ site na ịgbasa mmemme dị n'ime dị ka ego agụmakwụkwọ na usoro ọzụzụ nke ozi, ọ gbakwara mgbasawanye nke mmemme egwu egwu a na-akwanyere nke ụka. Madison anaghị eme ka ọha na eze mara, ma n'ime chọọchị ahụ, a na-asọpụrụ dị ka ezigbo ọkà okwu na onye ji okpukpe kpọrọ ihe.
Onye bishọp nke anọ bụ CM Bailey, si Newport News, Virginia, amụrụ ma zụlite ya na Houselọ Ekpere wee jee ozi dị ka ụkọchukwu
site na nwata. O bilitere n'ọkwa ụka, na-eje ozi dị ka ụkọchukwu na Virginia, Georgia, na Pennsylvania na ọnọdụ ndị isi ndị ọzọ chọrọ nnukwu ọrụ, emesịa bụrụ onye a họpụtara ịbụ Onye Isi Ala n'okpuru Daddy Madison na 2006. A họpụtara Bailey bishọp mgbe Madison nwụsịrị na 2008. Ọ bụ ezie na e weere ya dịka ntuli aka kacha nta nke bishọp na akụkọ ihe mere eme nke oflọ Ekpere, nhọrọ nke Bailey nyere ụfọdụ ndị otu nsogbu nnukwu iji mee ka ọnụọgụ nke ndapụ n'ezi ofufe. Ogologo oge nke ndu ndu Bailey ka ga-ahụ.
Otutu isi okwu nke oflọ Ekpere chere ihu mere na ntọala nke ụka. Dị ka onye ọha na eze, Grace bụ nkewa na esemokwu; mgbe ọ nwụsịrị, ọtụtụ n'ime nkatọ ndị a na-akụzi na mpụga na-eme ka ọha na eze nwee mmasị na chọọchị. Agbanyeghị na ụka gara n'ihu na enweghị mgbanwe dị mkpa, na enweghị onye ndu na-ese okwu, ọ bịara dị iche na okpukpe kachasị. Ọgba aghara nke Pentikọstism na ọkara nke abụọ nke narị afọ nke iri abụọ nyekwara aka na chọọchị na-apụ na mpaghara mmekọrịta okpukpe na nke okpukpe. Otú ọ dị, ndị Pentikọst agbanweghị n'ezie: ọ bụ ọha mmadụ America gbanwere, na-achọpụta ụdị ofufe na-adọrọ adọrọ nke maara nke ọma na nke ọma. N'agbanyeghi akụkọ ihe mere eme nke onwe ya, Houselọ Ekpere nke United kwesịrị ịkọwa ya n'ime mgbanwe ọdịbendị na ọdịmma ndị a n'ihi na ụka dara n'ime ọdịnala-inessdị Nsọ-Pentikọstal.
Otu nchegbu ndị n'èzí na-ekwukarị bụ “ilekwasị anya” banyere ego dị n'ime ụka. Ọ dịla mgbe ọ bụla na nnukwu ọrụ na-emetụta ọrụ Houselọ Ekpere bụ nchịkọta ego. Ndị na-eso ụzọ na-arụ ọrụ kwa afọ na ọrụ iji nweta ego maka ọrụ ụka, ma wepụta oge dị ukwuu maka ọrụ maka onyinye ego ọha na eze. N'ihi na ndị isi ọrụ na-arụ ọrụ dị ka usoro nke ala, a na-enyefe ndị isi ikike ma kesaa ya. Ndị nọ n'èzí na-ebokarị Daddy Grace ebubo na ọ na-emefusị ego ụka na uwe ya, ụlọ ya, na ụgbọ ala ya, ndị nkatọ na-eche na a ghọgburu ndị otu na-enyefe ego siri ike iji kwado bishọp ahụ. Agbanyeghị, echiche dị iche bụ na n'ime Houselọ Ekpere anaghị achụ ego na nzuzo ka ọ na-adịkarị n'ụdị ndị ọzọ nke Iso Christianityzọ Kraịst. Achọpụtara ego dịka ihe dị mkpa iji kwalite ọrụ ụka, yabụ bulie ya bụ isonye na ọrụ Chineke, na inye ya n'ihu ọha na-eweta otu nsọpụrụ. Dịka onye isi ụka, a tụkwasịrị bishọp obi ka ọ chọpụta etu kacha mma a ga-esi jiri ego ahụ ma kesaa ya. Maka oflọ Ekpere enweghi ihe ihere na ịbụ onye ọha na eze gbasara ego, mana ọdịbendị ọdịnala a na-emekarị ka ndị nọ na mba ọzọ nwee obi ọjọọ.
Ọzọkwa, bishọp bụ onye kachasị mkpa na chọọchị n'ihi na ọ bụ onye na-eduga Chineke, ya mere ndị otu n'ozuzu na-eche na ọ kwesịrị ịkwado ya na ndụ dị mma na mkpa nke ọrụ ya. Ka ụka ahụ na-eto eto, ọ bụ ihe ezi uche dị na ndụ bishọp kwesịrị ịnọchite anya nke kacha mma ọ ga-enye. Na ngwụsị 1930, Grace malitere itinye ego na nnukwu ụlọ akụ. N'ọnọdụ ụfọdụ, ọ na-etinye ego na ala ma ọ bụ ụlọ ndị ejiri ya maka ụka, mana ọ zụtakwara ọtụtụ ebe obibi maka ebe obibi ya na nnukwu ụlọ obibi nke ndị na-akwụ ụgwọ ụlọ na-akwụ ụgwọ. Ọtụtụ mgbe azụmahịa ya na-abụ isi akụkọ n'akwụkwọ akụkọ na akwụkwọ akụkọ ndị bụ isi n'ihi na e lere ya anya dị ka akụkọ akụkọ na nwoke nwere agba nwere ụdị nnukwu ikike ahụ. Usoro itinye ego n’ahịa a wusiri ụka ike n’ọtụtụ ụzọ: o mepụtara ọha, nke na-apụtakarị ịbata ndị ọhụrụ; ọ wuru ezigbo akụ na ụba, dịka a na-erezi ihe ndị ahụ na uru; ma o wetaara ọtụtụ ndị-otu nganga, ndị nsọpụrụ onwe ha metụtara na aha nke nzukọ-nsọ. Ọ bụ ezie na Grace ekwekọghị na ịnye ihe onwunwe (ụfọdụ ọ zụrụ n'aha nke ya, na ndị ọzọ n'aha ụlọ ọrụ ụka), na ọnwụ ya, a hapụrụ ụlọ ụka niile ala ma si otú a bụrụ onyinye onyinye mebere ogologo oge- kwuo nkwụsi ike ego. Agbanyeghị, afọ Grace jiri nweta ọtụtụ ala na ụlọ bụ ihe ọzọ kpatara na ndị na-abụghị ndị kwere na ihe dị njọ na njikwa ego na Houselọ Ekpere.
Gracedị onye Grace nyekwara aka na njedebe nke oflọ Ekpere, n'ihi na ụdị onwe ya abụghị obere ihe. Ọ na-eyi uwe na-enwu gbaa, chọọ onwe ya mma na ọla, ma na-eto mbọ aka ya ọtụtụ sentimita asatọ ma na-ese ha na-acha ọbara ọbara, ọcha, na-acha anụnụ anụnụ. Mgbe ụka ya kwụsiri ike ịkwado onwe ya, ọ malitere ikwu okwu nke onye ndu dị mkpa dịka ụgbọ ala okomoko, chauffer, na ndị na-eche ya nche. Ndị nọchiri ya, n'otu aka ahụ, nabatakwara uwe nke bishọp ahụ, mana ọ kpatara oke ọgbaghara maka onye ọ bụla n'ime ha. Nke a nwere ike gosipụta mgbanwe n'omume mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ma ọ bụ ọ nwere ike bụrụ na Grace mere nanị ka ndị nọ n'èzí n'ụzọ dị njọ mgbe ndị na-anọchi ya emeghị.
Otutu oge ndụ Papa Grace bụ ihe omimi n'ihi na ọ kpachaara anya kpuchie nzụlite ya, na-anaghị ekwukarị okwu doro anya banyere afọ ndị gara aga na ozi ya. Ikekwe ihe kacha sie ike banyere ya maka ndị America na ọkara mbụ nke narị afọ nke iri abụọ bụ agbụrụ ya "na-agbagwoju anya". Nzụlite Grace dị na ọdịbendị Afro-Lusophone nke Cape Verde, ebe agbụrụ agbụrụ dị mgbagwoju anya ma sie ike karịa ka ha dị na United States. Na Amerika, akpukpo aru ya na acha aja aja choputara ya dika Onye Oji, ma ebea, Grace atuleghi onwe ya dika obodo Africa America. Kama nke ahụ, o ji okwu Cape Verde wee kọwaa onwe ya, na-ekwu na ya bụ onye Portuguese site na mba ya nakwa na ọ bụ onye agbụrụ ọcha. Maka ndị mmadụ zụlitere na United States bụ ndị na-aghọtaghị otu agbụrụ nwere ike isi rụọ ọrụ na ọdịnala ọzọ, okwu Grace na-agbagwoju anya ma dị n'akụkụ mkpasu iwe. Ka o sina dị, ọ dịghị mgbe Grace gbanwere ọdịdị onwe ya ma ọ bụ gbanwee ya ka ọ daba n'ụkpụrụ America. Nke a bụkwa akụkụ nke ihe mere ya onye esemokwu okpukpe, ebe ọ bụ ọdịiche ọdịnala nke na-enweghị ike ịchịkwa n'oge ahụ nke akụkọ ntolite America.
Baer, ​​Hans A. na Merrill Onye ọbụ abụ. 2002. Okpukpe Okpukpe Africa: Iche iche nke Protestant na Ulo. nke abụọ. Knoxville: Mahadum nke Tennessee Press.
Curtis, Edward E. na Danielle Brune Sigler, ụmụ nwoke. 2009. Chi ohuru ohuru: Arthur Huff Fauset na omumu banyere okpukpe ndi Afrika. Bloomington: Mahadum Indiana University.
Dallam, Marie W. 2007. Papa Grace: A Celebrity Preacher na Houselọ Ekpere Ya. New York: New York University Press.
Davis, Lenwood G., mkpokọta. N'afọ 1992. Papa Grace: Akwụkwọ akụkọ akọwapụtara. New York: Greenwood Pịa.
Fauset, Arthur Huff. 1944. Chi ojii nke obodo ukwu: Okpukpe okpukpe nke Negro nke North Urban. Philadelphia: Mahadum nke Pennsylvania Press.
Hodges, John O. 1989. “Charles Manuel 'Daddytọ Nna' Grace.” Pp. 170-9 n'ime Okpukpe Ndị Kraịst Na-ewu ewu na Narị Afọ nke Iri Abụọ, nke Charles Lippy dere. New York: Greenwood Press.
Mpaghara egwu. 1995. VHS. Susan Levitas, Onye isi. Akwụkwọ akụkọ California.
Robinson, John W. 1974. “Abụ, Ekpere, na Ekpere.” Pp. 213-35 n'ime Nwa Oji na Okpukpe, nke C. Eric Lincoln dere. Ogige City, NY: Akwụkwọ Anchor.
Sigler, Danielle Brune. 2005. "Papa Grace: Akụkọ Mbata nke Onye Immigrant." Pp. 67-78 na Okpukpe ndị kwagara mba ọzọ: ịgbanwe ndụ okpukpe na America, nke Karen I. Leonard et al dere. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.
Sigler, Danielle Brune. 2004. "Na-esote ọnụọgụ abụọ: visgaghachi na Nna Chineke, Papa Grace, na Ministri ha." Pp. 209-27 n'ime Agbụrụ, Mba, na Okpukpe na America, nke Henry Goldschmidt na Elizabeth McAlister dere. New York: Oxford Mahadum. Pịa.